ထပ်တူပြုသမျှ – သုံးဘာဝ | ZAYYA
← သို့ဖြင့် ~
မနေ့၊ မနက်၊ မနက်ဖြန် တို့၏ ပစ္စုပ္ပန် →
ထပ်တူပြုသမျှ – သုံးဘာဝ
ဘာဝနာ သည် ထပ်တူပြုခြင်း အားလုံး ( “ငါသည် ဤဟာ ဖြစ်သည်။ ထို ဟာ ဖြစ် သည်” ဟု – စသည် တမ်းစွဲ သတ်မှတ် အခြေပြု နေ သမျှ ) ကို အဖြေ မွှေနှောက် ၍ ဖြေဖျောက် ၏။
ဘာဝနာ မရှိလျှင် – ကျနော် တို့သည် မိမိ ကိုယ်ကို – မိမိ ခန္ဓာ နှင့် ထပ်တူပြု မှတ်ယူ စမြဲ ဖြစ်သည်။ ပဏာမ အနေဖြင့် ဘာဝနာကို အဆင့် ခွဲခြားပါလျှင်- ဘာဝနာ ၏ ပထမ အဆင့် တွင် – ယင်း ထပ်တူပြု မှု ကို ဖြိုခွင်း သည်။ ကျနော် တို့ သည် ကျနော် တို့ ခန္ဓာ မဟုတ်ပေ။ ယနေ့ အခါတွင် ဘာသာရေး ရာ ဆွေးနွေး သူ များ သည် ယင်း ကို ကောင်းစွာ လက်ခံ တတ်ကြသည်။ သို့သော်- စာသိ အဆင့် သာ ရှိလျှင် မည်သို့မျှ အကျိုး ရှိမည် မဟုတ်ပေ။ ဘာဝနာ က ယင်း အဖြစ် ကို စာ မှ ကျော်လွန် ၍ မိမိ အမြင် အနေ အားဖြင့် – ကောင်း စွာ သိမြင် သွား စေရန် စွမ်းဆောင် ပေးသည်။
ထိုမှ နောက်တစ်ဆင့် – – ကျနော်တို့သည် မိမိ ကိုယ်ကို မိမိ စိတ် နှင့် ထပ်တူပြု ၍ မှတ်ယူ တတ်ပြန် သည်။ ဤထပ်တူပြုချက် သည် အများစု၌ ဖြစ်ကြ သည်။ လူ၊ သတ္တဝါ အများစု သည် အတွေးစဉ် ကို မိမိ ကိုယ်တိုင် ဖြစ်သည် ဟူ၍ မှတ်ယူ ရန် လွယ်ကူ သည်။ သိမှု သက် သက် ဖြင့် စောင့်ကြည့် မှု မရှိ သည့် အခါ (ဝါ) ဘာဝနာ မရှိသည့်အခါ – မိမိ ၏ ခုန်လွှား ပြေး သွားနေ တတ်သော ဤစိတ်ကို မိမိ သာ ဖြစ် ၏ ဟု မှတ်ယူသည်သာ များသည်။
ဘာဝနာ ၏ ဒုတိယ အဆင့် သည်- ယင်း ထပ်တူပြုချက်ကို လည်း ဖြိုခွင်း ပါ သည် ။ ကျနော် တို့ ၏ အတွေးစဉ်၊ ဆန္ဒ၊ ခံယူချက် တို့သည် ကျနော်တို့ မဟုတ်ကြောင်း – ဘာဝနာ အတန်ငယ် ရင့်ကျက်သူသည် ဘဝင် တကျ မြင်နိုင် သည်။ ဘာဝနာ အားဖြင့် ဆိုလျှင် – ဤ စိတ်ကူး၊ အတွေး အလွှာသည် – အစောင့် ကြည့် ခံ အရာများ သာ ဖြစ် ကြောင်း သိသည်။ စင်စစ် အတွေးစဉ် တို့ သည် – ငါလည်း မဟုတ်။ သူ လည်း မဟုတ်။ ထိုမှတစ်ပါး – အခြားလည်း မဟုတ်ပေ။
ထိုနောက် ကျနော် တို့ အတွက် အလေးနက်ဆုံး နှင့် အရေးပါဆုံး ထပ်တူပြုမှု သည် – “မိမိ နှလုံး၊ မိမိ သိမှတ် မှု ကိုပါ မိမိ ဖြစ်သည် ထပ်တူ ပြုနေခြင်း” ဟူ၍ တတိယ အဆင့် အားဖြင့် ဖြစ် လာသည်။ ဤနေရာ ၌ ခံစားချက်၊ စေတသိက် များ ကူးလူး ယှက်နွယ် လျက် ရှိသည်။ အခိုင်မာဆုံး တွယ်ညိ ထားသော – ထပ်တူပြု စွဲလမ်းမှု အဆင့် လည်း ဖြစ်သည်။ အတ္တမ၊ ဝိညာဉ် စသဖြင့် ဗြဟ္မဏ ဝါဒ တို့ ခေါ်ဝေါ်ကြ ၍ မိမိကိုယ်ကို ထပ်တူပြု ထားလေ့ ရှိသော – အနူးညံ့ဆုံး၊ အသိ ရခက် ဆုံး နှင့် အစွဲမြဲ ဆုံး အရာ လည်း ဖြစ် သည်။ ဘာဝနာ သည် ယင်း ထပ်တူပြု မူ ကိုလည်း ဖျက်ချ ပါသည်။
ဤ သို့ ဖျက်ချ သည့် အဆင့် သုံးဆင့် ကို အငြင်းကြီး သုံးခု ဟု အလွယ် ဆိုပါ မည်။ စင်စစ် ဤ အငြင်း သုံးခု သည် အရာရာ ကို ငြင်းပယ်ခြင်း မဟုတ် ကြောင်း သိ ရန် လို သည်။ ဤ အငြင်း သုံးခု ကို လက်တွေ့ သိနိုင် ခြင်းမှာ ဘာဝနာ ဖြင့် သာ ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း ၏ တစ်ဖက်တွင် – မိမိ ဖြစ်တည် မှု တစ်ရပ် လုံး လက်ခံမှု ဟူသည့် သဘော – သီးခြား တည် ရှိသည်။
ဘာဝနာ ၏ စင်စစ် အလုပ် မှာ – “မိမိ သည် မည်သူ ဖြစ် သနည်း” ဆို သည့် မေးခွန်း အတွက် အဖြေ ရှာ ခြင်း ဖြစ် ပါသည်။ ဘာဝနာ သည် ယင်း အဖြေ ကို လက်တွေ့ ရှာဖွေ ရင်း- မိမိ မည်သူ ဖြစ်သည် ဟူသော အဖြေ ဟူသမျှ တို့ ကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပယ်ဖျက် ပြီး ဖြစ် လာ သည်။ အလားတူ အဆုံး ၌ မိမိ မည်သူ ဖြစ်ကြောင်း မေးခွန်း ကို လည်း စွန့်ဖယ် ပြီး ဖြစ်တော့ သည်။
Real religion starts in negation and ends in absolute affirmation.
အငြင်း များ နှင့် စတင် ခဲ့သည့် အဆုံး၌ ခိုင်မာသော လက်သင့်ခံမှု ကို ကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံ သိရှိရ သည်။ အိုရှိုး ၏ စကားဖြင့် ဆိုလျှင် ယင်း ကို Total Yes, Absolute Yes ဟူ၏။ တနည်း ဆိုလျှင် – အမှောင်မှ လွတ်ထွက်လာခြင်း၊ ဒုက္ခ တို့ မှ – ချုပ်ငြိမ်းခြင်း၊ မရဏမှ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ အနှောင် အဖွဲ့ မှ ဖြေပျောက်ပြီး ဖြစ်ခြင်း စသည် အားလုံး ကိုလည်း ကိုယ်စားပြု ပါသည်။ ထို အချိန် တွင် သင် သည် ဘုရား သခင်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပြီး၊ သင် ကိုယ် တိုင် သည် ဘုရားသခင် ဖြစ်သည်။ အရာ အားလုံး ကို ငြင်းပယ် ပြီး သည့် နောက် ၌ အရာ အားလုံး ကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း အခိုင် အမာ သိမြင် သွားခြင်း ဟုလည်း ဆိုပါသည်။
~ the Golden Wind.
May 31st 2012 @ 1:50 PM
Filed under Osho Tagged with identities, Osho, three